Tonga ny beta 5 ho an'ny watchOS 2.2 | Avy amin'ny mac aho
Beta 5 ho an'ny watchOS 2.2 dia eto
Manohy amin'ny andiana betas izahay ary Apple dia namoaka androany tolakandro ny beta fahadimy an'ny watchOS 2.2 ho an'ny mpamorona ankoatran'ny kinova beta ho an'ny iOS sy OS X 10.11.4. Amin'izao fotoana izao, toy ny tamin'ny beta teo aloha, angatahina ireo mpamorona mba hizaha toetra ny fiasan'ny Bluetooth sy ny fahamarinan-toeran'ny rafitry ny fiambenana, saingy kely ny fantatra momba ny vaovao. mandra-pahatongan'ny mpamorona mahita ny kaody an'ny kinova vaovao.
Matetika i Apple dia mamoaka kinova beta amin'ny fotoana iray ary herinandro aorian'ny beta 4 dia efa ananantsika eo amin'ny latabatra ny manaraka. Tsy miatrika kinova izay manampy fanovana miavaka izahay, saingy marina fa tsindraindray dia tsara ny manana vanim-potoana fitoniana sy filaminana ao amin'ireo rafitra mba hanampiana ny vaovao amin'ny fototra tsara. Amin'ity indray mitoraka ity dia fotoana ho an'ny zava-baovao vitsivitsy, saingy azo antoka fa amin'ity taona ity isika dia mahita zavatra mahaliana mandritra ny fahavaratra.
Aza adino fa ilaina ny manana batterie 50% na ny famantaranandro miambina hametrahana ireo fanavaozana ireo. Mariho fa izy ireo dia mikendry ny developer sy raha vao apetraka amin'ny famataranandro dia tsy misy fomba hiverenana toy ny amin'ny iOS betas. Ho fanampin'izay, mba hametrahana ireo kinova beta ireo sy hahatonga azy ireo hifanaraka amin'ny iPhone, dia mila manana iray amin'ireo iOS 9.3 betas napetraka ihany koa izy ireo ary tsy hoe ratsy izany, fa tsara kokoa ny miandry ireo kinova ofisialy.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Beta 5 ho an'ny watchOS 2.2 dia eto
Apple dia namoaka beta 5 an'ny iOS 9.3, watchOS 2.2, OS X 10.11.4 ary tvOS 9.2 ho an'ny rehetra